OSX मा होस्टहरू प्रयोग गर्दै स्थानीय रूपमा DNS प्रमाणित गर्न आवश्यक छ? | Martech Zone
बिहीबार, फेब्रुअरी 21, 2019 शुक्रबार, फेब्रुअरी 22, 2019 Douglas Karr
मेरो एक ग्राहकले आफ्नो वेबसाइट बल्क होस्टिंग खातामा पुन: स्थानान्तरण गर्‍यो। तिनीहरूले A र CNAME रेकर्डको लागि उनीहरूको डोमेनको DNS सेटिंग्स अपडेट गर्‍यो तर साइट नयाँ होस्टिंग खाता (नयाँ आईपी ठेगाना) सँग समाधान गर्दैछ कि हुँदैन भनेर निर्धारण गर्न गाह्रो भयो।
DNS लाई ट्रबलशुटिंग गर्ने बेलामा दिमागमा राख्नुपर्ने केहि चीजहरू छन्। DNS कसरी कार्य गर्दछ भन्ने बुझ्दै, तपाईंको डोमेन रजिस्ट्रारले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्दछ, र त्यसपछि तपाईंको होस्टले उनीहरूको डोमेन प्रविष्टि कसरी प्रबन्ध गर्दछ भन्ने बुझ्दछ।
DNS कसरी काम गर्दछ
जब तपाइँ एक ब्राउजर मा एक डोमेन टाइप:
डोमेन एक इन्टरनेट मा देखा परेको छ नाम सर्भर अनुरोध कहाँ पठाइनु पर्छ कहाँ पत्ता लगाउन।
वेब डोमेन अनुरोध (http) को मामलामा, नाम सर्वरले दिनेछ तपाईंको कम्प्युटरमा IP ठेगाना फर्काउँछ.
तपाईंको कम्प्युटरले त्यसपछि यसलाई स्थानीय रूपमा भण्डार गर्दछ, तपाईंको रूपमा चिनिएको DNS क्यास.
अनुरोध होस्टलाई पठाइन्छ, जुन अनुरोधलाई मार्गमा बदल्छ आन्तरिक रूपमा र तपाइँको साइट प्रस्तुत गर्दछ।
तपाईंको डोमेन रजिस्ट्रारले कसरी काम गर्दछ
यसमा नोट ... प्रत्येक डोमेन रेजिस्टरले वास्तवमा तपाईंको DNS प्रबन्ध गर्दैन। मसँग एउटा ग्राहक छ, उदाहरण को लागी, कि याहू मार्फत उनीहरूको डोमेन रेजिस्टर! याहू! वास्तवमा उनीहरूको प्रशासनमा यस्तो देखिँदै डोमेन व्यवस्थापन गर्दैन। तिनीहरू केवल को लागी एक बिक्रेता हो Tucows। नतिजाको रूपमा, जब तपाइँ याहूमा तपाइँको DNS सेटि toहरूमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ, ती परिवर्तनहरू वास्तवमा अद्यावधिक हुनु अघि घण्टा लिन सक्दछ। वास्तविक डोमेन रजिस्ट्रार।
जब तपाइँको DNS सेटिंग्स अपडेट हुन्छन्, तिनीहरू तब ईन्टरनेटमा सर्भरहरूको एर्रेमा प्रचार गरिन्छ। धेरै जसो समय, यसले शाब्दिक रूपमा केहि सेकेन्ड लिन सक्दछ। यो एक कारण हो किन मानिसहरूले भुक्तानी गर्नेछन् व्यवस्थित DNS। व्यवस्थित DNS कम्पनीहरूसँग दुबै रिडन्डन्सी हुन्छ र अविश्वसनीय रूपमा छिटो हुन्छ… प्राय जसो तपाईंको डोमेन रजिस्ट्रार भन्दा छिटो।
एक पटक इन्टरनेट सर्वरहरू अपडेट भएपछि, अर्को पटक तपाईंको प्रणालीले DNS अनुरोध गर्दछ, तपाईंको साइट होस्ट गरिएको आईपी ठेगाना फिर्ता हुन्छ। NOTE: दिमागमा राख्नुहोस् कि मैले भने पछि अर्को पटक तपाईंको सिस्टमले अनुरोध गर्दा। यदि तपाईंले पहिले त्यो डोमेन अनुरोध गर्नुभयो भने, इन्टरनेट अप टु डेट हुन सक्छ तर तपाईंको स्थानीय प्रणालीले तपाईंको DNS क्यासमा आधारित पुरानो आईपी ठेगानालाई समाधान गर्दैछ।
तपाईंको होस्ट DNS कसरी काम गर्दछ
तपाईंको स्थानीय प्रणाली द्वारा फिर्ता र क्यास गरिएको आईपी ठेगाना एकल वेबसाइटमा सामान्यतया अद्वितीय हुँदैन। एक होस्टमा दर्जनौं वा सयौं वेबसाइटहरू एकल आईपी ठेगानामा होस्ट हुनसक्दछ (सामान्यतया सर्भर वा भर्चुअल सर्भर)। त्यसो भए, जब तपाईंको डोमेन आईपी ठेगानाबाट अनुरोध गरिन्छ, तपाईंको होस्टले तपाईंको अनुरोधलाई सर्वर भित्र निर्दिष्ट फोल्डर स्थानमा फर्वार्ड गर्दछ र तपाईंको पृष्ठ प्रस्तुत गर्दछ।
DNS को समस्या निवारण कसरी गर्ने
किनकि यहाँ तीन प्रणालीहरू छन्, त्यहाँ समस्या निवारणका लागि तीन प्रणालीहरू पनि छन्! पहिले तपाईले आफ्नो स्थानीय प्रणाली जाँच गर्न चाहानुहुन्छ तपाईको प्रणालीमा IP ठेगाना कहाँ देखाउँदछ।
यो सजीलै टर्मिनल विन्डो खोलेर र टाइप गरेर गरिन्छ:
वा तपाईं वास्तवमै निर्दिष्ट नाम सर्भर लुकअप गर्न सक्नुहुन्छ:
यदि तपाईले आफ्नो डोमेन रजिस्ट्रारमा DNS सेटिंग्स अपडेट गर्नु भयो भने तपाईले DNS क्यास खाली भएको सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ र तपाई फेरि अनुरोध गर्न चाहानुहुन्छ। OSX मा तपाईंको DNS क्यास खाली गर्न:
तपाइँ पुन: प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ पिंग or nslookup यस विन्दुमा डोमेन नयाँ IP ठेगानामा समाधान भयो कि भनेर हेर्नका लागि।
अर्को चरण हेर्ने हो कि इन्टरनेट DNS सर्भरहरू अद्यावधिक गरिएको छ। राख्न DNSstuff यसको लागि उपयोगी, तपाईं एक राम्रो DNSreport प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ उनीहरूको प्लेटफर्मको माध्यमबाट जुन वास्तवमै राम्रो छ। Flywheel यसको प्लेटफर्ममा एक उत्कृष्ट DNS परीक्षक छ जहाँ उनीहरू क्वेरी जाने छन् गुगल, OpenDNS, फोर्टलनेट, र प्रोब नेटवर्क यदि तपाइँको सेटिंग्स को वेब को लागी सही प्रचार गरीएको छ कि भनेर हेर्न।
यदि तपाइँ वेब ठेगानामा आईपी ठेगाना ठीकसँग देखाइरहनुभएको छ र तपाइँको साइट अझै देखाईएको छैन भने, तपाइँ इन्टरनेटको सर्भरहरू पनि बाइपास गर्न र तपाइँको प्रणालीलाई आईपी ठेगानामा सिधा अनुरोध पठाउन भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यो होस्ट फाईलहरू अपडेट गरेर र तपाईंको DNS फ्लस गरेर पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। यो गर्न, टर्मिनल खोल्नुहोस् र टाइप गर्नुहोस्:
तपाईंको प्रणाली पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् र प्रविष्ट थिच्नुहोस्। यसले सम्पादनको लागि टर्मिनलमा सिधा फाइल ल्याउँदछ। तपाईंको एर्रोको प्रयोग गरेर तपाईंको कर्सर लैजानुहोस् र डोमेन नाम पछिको आईपी ठेगानाको साथ नयाँ लाइन थप्नुहोस्।
फाईल बचत गर्नका लागि थिच्नुहोस् नियन्त्रण-ओ तपाईंको कुञ्जीपाटीमा फिर्तानाम स्वीकार्न फिर्ता जानुहोस्। थिचेर सम्पादकबाट बाहिर निस्कनुहोस् नियन्त्रण x, जसले तपाईंलाई कमाण्ड लाइनमा फर्काउँछ। तपाईंको क्यास फ्लश गर्न नबिर्सनुहोस्। यदि साइट ठीकठाट आएको छैन भने, यो तपाईंको होस्टमा स्थानीय समस्या हुन सक्छ र तपाईंले उनीहरूलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई जानकारी दिनुपर्दछ।
अन्तिम नोट ... आफ्नो होस्ट फाइललाई यसको मूल संस्करणमा फर्काउन नबिर्सनुहोस्। तपाईं त्यहाँ प्रविष्टि छोड्न चाहनुहुन्न जुन तपाईं स्वचालित रूपमा अद्यावधिक गर्न चाहनुहुन्छ!
यी चरणहरू अनुसरण गरेर, म प्रमाणित गर्न सक्षम भयो कि दर्ताकर्तामा मेरो DNS प्रविष्टिहरू मितिमा थिए, इन्टरनेटमा DNS प्रविष्टिहरू मितिमा थिए, मेरो म्याकको DNS क्यास अप टु डेट थियो, र वेब होस्टको DNS अप थियो। मितिमा ... जानु राम्रो छ!